Namuhla amantombazana amaningi avame ukukhononda ngobuhlobo obungagcwaliseki nomama womyeni wakhe, ephikisana ngokoqobo ukuthi uninazala "uyithole." Futhi le nkulumo ivame ukukhulunywa hhayi kuphela yilabo abasanda kushada futhi bengenaso isikhathi sokuzivumelanisa nezihlobo ezintsha, kodwa nalabo abavele benokuhlangenwe nakho okuhle. Yini okumelwe ukwenze esimweni lapho umama wesibili nje enganikeli ukuphila futhi uphazamise njalo iseluleko sakhe esidingekayo nesingadingekile? Into eyodwa icacile: uma "uthola" umkhwekazi wakho, akufanele uphinde uhlupheke, ngoba uma ungagcini lokhu kungenelela ngesikhathi, khona-ke kuyoba kubi nakakhulu.
Okokuqala, uma umbhangqwana omdala ohlala emshadweni uhlala nabazali bawo endlini efanayo engeyona eyabo, cishe njalo kunenkinga eminingi. Ngaphambilini, lapho abantu behlala emindenini emikhulu, lapho kwakukhona okungenani izizukulwane ezintathu, kwaphakama imibuzo enjalo, kodwa yahlushwa ukuthi ngaphansi kwezimo ezinjalo iningi lahlala, futhi lesi simo samukelwa ngokujwayelekile. Isimo nomthelela welunga ngalinye lomndeni lithembele eminyakeni yakhe. Manje wonke umuntu uzama ukuzimela, ngakho-ke izimo ezinjalo kubantu abaningi abasha abamukeleki. Yingakho, ukuze angatholi "uninazala", ekuqaleni umuntu kufanele ahlele impilo ehlukile, kungakhathaliseki ukuthi ngabazali bobabili kusukela kumyeni nakumfazi. Masibe yindlu yokuhlala engabizi, makwenze kube nzima, kodwa akekho ozokuvimbela ekwakheni injabulo yomndeni wakho.
Yini okumelwe ngiyenze uma umamazala "ayitholile"? Amathiphu asebenzayo
Kungenzeka ukuthi umalokazana nomama womyeni wakhe bayoba abangane abamangalisayo kufana nokuthi kungenzeka ukuthi bazoba izitha ezingenakuqhathaniswa. Amacala wangempela lapho engakwazi ukuhlangana ndawonye, empeleni, amancane kakhulu, futhi uma ekhona, axhunyaniswe nokukhubazeka kwengqondo, noma ukuguga kwengqondo kumntwana. Zonke ezinye izimo zingakwazi futhi kufanele zinqobe. Uma umkhwekazi "uphume", okokuqala kufanele uzame ukumbiza ucingo olungenangqondo. Zama ukuzibeka endaweni yayo. Akulula kakhulu umama ukuthatha, nokukhululwa kwengane yakhe, lapho yonke imali isetshenziswe khona. Ngakho-ke, kufanelekile ukumchazela ngokuthula ukuthi uyamthanda indodana yakhe ngaphansi kwayo. Zama ukulalela ngokuthula izincomo nezeluleko zakhe, makube mnandi, kodwa ngesikhathi esifanayo, wenze njengoba ubona kufanelekile. Ngesinye isikhathi imbangela yokucasula umkhwe wakhe ngumhawu wakhe. Kulesi simo, umalokazana ubonakala njengesihlaseli, "owazungezile" wamthatha indodana yakhe ethandekayo. Kulesi simo, udinga ukucela othandekayo wakho ukuba anakekele kakhulu umama, ukuze angabi nomuzwa wokuntula uthando. Nenye enye indlela enhle ongayisebenzisa uma umamazala wakho akhiphe ezindabeni zezomnotho. Ibizwa ngokuthi "ukwelapha okuvuselela". Uma umama wesibili ethanda ukumnikeza iseluleko, ngakho ngokubonakala kwakhe okungalindelekile, ukuveza injabulo, nokubhekisela emisebenzini yakhe, mnike zonke izimo lapho (ngokubona kwakhe) eqonda kangcono. Emva kwalokho, masinyane uye emsebenzini noma ngesizathu esithile, futhi kusihlwa, ngayo yonke inhliziyo yakho, ngiyabonga futhi uthi uyesaba kakhulu. Into esemqoka ukuzuza amandla emoyeni nesibindi kule nkathi yokuguquka. Futhi lapho, ubona, konke kuzokuthuthuka kancane kancane.
Umlando sokudalwa, impumelelo, izinhlamvu kanye abadlali. "Home Alone" - okungcono umndeni ahlekisayo